सिक्कल सेल एनिमिया थारु समूदाय मात्रै होइन, सबैलाई हुनसक्छ’ - AP Khabar
सिक्कल सेल एनिमिया थारु समूदाय मात्रै होइन, सबैलाई हुनसक्छ’
२५ श्रावण २०७६, शनिबार ०६:४९
काठमाडौँ, साउन २५ : सिक्कल सेल एनिमिया भने पछि थारु समुदायमा लाग्ने रोग हो भन्ने हामी धेरैको मस्तिष्कमा छाप बसेको कुरा हो । सिक्कल सेल एनिमिया वंशाणुगत अवस्था हो जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ भन्ने जनचेतनाको कमी हुँदा यो रोगबारे अन्य नागरिकले भने खासै चासो दिएको पाइँदैन । सरकारले पनि सिक्कल सेल एनिमियाका कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायमा मात्रै बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
नेपालको एकमात्र वंशाणुगत रोगका विशेषज्ञ डाक्टर निलम ठाकुर भने सिक्कल सेल एनिमिया एक समुदायमा मात्रै नभइ जो कोहीलाई लाग्ने हुँदा सबै नागरिक यो रोगबाट सचेत रहनु पर्ने बताउँछिन् । डा. ठाकुरले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा सिक्कल सेल एनिमिया के हो, यसको लक्षण, उपचार र बच्ने उपाएको बारेमा जानकारी गराएकी छिन् ।
सिक्कल सेल एनिमिया कुनै लुकेको अवस्थामा हुन्छ । लुकेको अवस्थामा सिक्कल सेल एनिमिया लागेको व्यक्तिले लुकेकै अवस्थामा भएको व्यक्तिसँग विवाह गरेको खण्डमा त्यो दम्पत्तिबाट जन्मने बच्चामा सिक्कल सेल एनिमिया देखिन सक्ने सम्भावना हुन्छ । एक व्यक्तिमा लागेपछि परिवारको अर्काे सदस्यमा लाग्छ नै भन्ने त छैन तर सम्भावना चाहिँ बढी नै हुन्छ ।
नेपालको सवालमा कुरा गर्नुपर्दा थारु समुदायमा धेरै देखिएको हुँदा सिक्कल सेल एनिमिया थारु समुदायमा मात्रै हुन्छ भन्ने भ्रम परेको छ । तर सिक्कल सेल एनिमिया वंशाणुगत रोग हो र यो जसलाई पनि हुन सक्छ । थारु समुदायमा मात्रै देखिने रोग हो हामीलाई हुँदै–हुँदैन भन्ने होइन । थारु समुदायको धेरै व्यक्तिमा देखिएको हुँदा सरकारको प्राथमिकतामा परेको हो । फेरि थारु समुदायमा धेरै भयो भन्दैमा अन्य थारु समुदायको व्यक्तिले मलाई सिक्कल सेल हुन्छ भन्ने पनि सोच्नु भएन ।
सिक्कल सेल एनिमिया लागेपछि आउने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याहरु के–के हुन्छन् ?
हँसिया जस्तो रगत जहाँ—जहाँ गयो त्यहाँ —त्यहाँ समस्या देखिन सक्छ । त्यसैले सिक्कल सेल एनिमिया भएको हरेक व्यक्तिमा यही समस्या हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्थानै छैन । हँसिया जस्तो रगत मष्तिस्कमा गयो भने मष्तिस्कको समस्या हुन्छ भने मुटुमा गयो भने मुटुमा समस्या हुन्छ । शरीरको जुनसुकै भागमा समस्या देखिन सक्छ ।
सिक्कल सेल एनिमिया भएको व्यक्तिले सोही रोग भएको व्यक्तिसँग विवाह गर्ने, श्रीमान—श्रीमती दुबै जनालाई रोग लागेको छ भने सन्तानको जन्माउने नजन्माउने बारेमा ध्यान दिनुपर्छ । सिक्कल सेल एनिमिया औषधि खाएर निको हुँदैन त्यसैले सकेसम्म यस्ता समस्या भएको व्यक्तिले सन्तान नजन्माउनुनै रोकथामको राम्रो उपाए हो । यहाँ उपचारको लागि सिक्कल सेल एनिमिया भएको दम्पत्ति त्यसमा पनि गर्भ बसिसकेको अवस्थामा अब के गर्ने भनेर आउनुहुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा दुई जना(श्रीमान—श्रीमती) को जेनेटिक टेष्ट गरेको छ भने बच्चा पेटमै हुँदा पेटको पानी झिकेर बच्चालाई सिक्कल सेल एनिमिया भए नभएको जाँच्न सकिन्छ । त्यसपछि बच्चामा पनि लागेको छ भने जन्माउने नजन्माउने भन्ने विषयमा सल्लाह दिने काम गर्छाैँ ।
अर्काे कुरा चिकित्सकले तोकेको समय अनुसार नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । रोग कुन खालको हो र कुन अवस्था छ, त्यो अनुसार औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि पनि सरकारले प्रदान गरेको एक लाख भित्रनै पर्छ ।
अलि—अलि सामान्य कुराहरु भइरहेका हुन्छ । हामीले त्यस्ता सामान्य लक्षणलाई ध्यानै दिँदैनौ । कति बिरामी कमजोरी भएको हो कि भन्दै अस्पताल आउनुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिमा पनि सिक्कल सेल एनिमिया भएको देखिन्छ । फेरि हामी नेपालीको बानि भनेको धेरै समस्या नभएसम्म अस्पताल जाने चलन छैन । सिक्कल सेल एनिमिया निको हुने रोग होइन । रोग लाग्न नदिनको लागि रोकथाम नै मुख्य उपाय हो ।